Wasiirka Amniga oo xariga ka jaray xarun ay yeelanayaan Ciidamada Booliska qeybta Miino baarista – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed oo uu wehliyo Taliyaha Ciidamada Booliska Jen, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa xariga ka jiray xarun cusub oo ay yeelanayaan Ciidamada Booliska qeybta Miino baarista.
Koox miino baarayaal ah oo loo tababaray habka miinada loo soo saaro iyo si looga hortago in aysan waxyeelo geysan marka ay qarxinayaan ayaa soo bandhigay dhoolatus ay ku muujinayeen wixii ay barteen.
Taliyaha Ciidamada Booliska Jen, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa sheegay in ciidanka booliska qeybta miino baarista u qaabilsan ay qabteen howlo muhiim ah, isla markaana ay yihiin koox uu ku faano taliska ciidanka booliska, ayna joogteynayaan tababar siinta ciidamada kale ee booliska.
Wasiirka Amniga gudaha C/risaaq Cumar Maxamed ayaa tilmaamay inay tahay tallaabo lagu farxo sida ay ciidamada u tababaran yihiin, isla markaana ay uga go’an tahay in shacabka ay ka difaacaan qaraxyada.
Hogaanka cusub ee Ciidamada Booliska ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday tallaabooyin uu ku hormarinayo ciidamada iyo isku xirka Ciidamada, waana markii u horeysay ee xarun gaar ah loo furo ciidanka booliska qeybta miino baarista